ရေဒီယို အသံလွှင့်စက်၊ ရေဒီယို အသံလွှင့်စက်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် တီဗွီလိုင်းများ
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ဒီဇိုင်းနှင့် ထောက်ပံ့ရေး - FMUSER သည် ပြီးပြည့်စုံသော အသံလွှင့်ကိရိယာ ပက်ကေ့ဂျ်များနှင့် ပြီးပြည့်စုံသော ဖြေရှင်းချက်များအား ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများသို့ ရောင်းချပေးနေသည့် အသံနှင့် ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုဆိုင်ရာ ပစ္စည်းအမျိုးအစားအားလုံးကို အကျုံးဝင်သည် - ပိုမိုသိရှိရန်.
ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောစက်ရုံစျေးနှုန်း - ကျွန်ုပ်တို့ပိုင်ဆိုင်သော ပထမတန်းစားကုန်ထုတ်စက်ရုံသည် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနတိုင်းအတွက် အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး ဘတ်ဂျက်စျေးနှုန်းများဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အသံလွှင့်ကိရိယာများကို အာမခံပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် အကောင်းဆုံး ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ပေးသွင်းခြင်းကို ရှာဖွေနေပါက သို့မဟုတ် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော ဖြေရှင်းချက်များနှင့်ပတ်သက်သည့် နောက်ဆုံးသတင်းအချက်အလတ်များ လိုအပ်နေပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
စိတ်ကြိုက် Solutions - ကျွန်ုပ်တို့တွင် ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် IPTV တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်းအတွက် စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းချက်များစွာကို ပေးစွမ်းနိုင်သည့် ခိုင်မာသောနည်းပညာနှင့် အရောင်းအဖွဲ့တစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် သင်လိုချင်သမျှ အရာအားလုံး၊ ထုတ်လွှင့်မှုအထုပ်မှ၊ အင်တင်နာစနစ် အပြည့်အစုံ ၊ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု ကိရိယာများ စသည်တို့ ရှိသည်။ လည်ပတ်ရန်နှိပ်ပါ.
တစ်ခုတည်းသော ယှဉ်ပြိုင်မှု - ဆယ်စုနှစ်များစွာ အသံလွှင့်စက်များ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်း အတွေ့အကြုံဖြင့် FMUSER BROADCAST သည် FM ထုတ်လွှင့်သည့် လက်ကားရောင်းချသူ သို့မဟုတ် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနမှ စက်ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူသူအား အပြိုင်အဆိုင် စျေးနှုန်းနှင့် သာလွန်သော အရည်အသွေးဖြင့် ထုတ်လွှင့်သော ထုတ်ကုန်များကို သေချာစေနိုင်ပါသည်။
မြင့်မားသောထိရောက်သောထုတ်လုပ်မှု - 30+၊ 3K+၊ 30K+၊ 300K+ အပိုင်းအစများနှင့် လစဉ်လက်ကားရောင်းချမှုများနှင့် လက်လီရောင်းချသည့် အမှာစာများသည် FMUSER BROADCAST အတွက် ပြဿနာမဟုတ်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စက်ရုံနှင့် ရင့်ကျက်သော အရောင်းကွန်ရက်ကြောင့်၊ Amazon၊ Ali Express၊ Alibaba နှင့် eBay စသည်ဖြင့် စျေးဝယ်ပလပ်ဖောင်းများတစ်လျှောက် FMUSER ကို သင်တွေ့နိုင်သည်။
ငါ့မြေး - အမိန့်ထုတ်ထုတ်လွှင့်သည့်ထုတ်ကုန်များကို အပြီးသတ်မပို့ဆောင်မီ၊ အစိတ်အပိုင်းဂဟေဆက်ခြင်း၏အဆင့်များနှင့်အညီ ၎င်းတို့အား တင်းကြပ်စွာစမ်းသပ်ခြင်း>> ကိုယ်ထည်တပ်ဆင်ခြင်း>> အသံစမ်းသပ်ခြင်း>> စက်ရုံဟောင်းမှ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုအား အပြင်းထန်ဆုံးစံချိန်စံညွှန်းပြည့်မီစေရန်အတွက် ၎င်းတို့အား တင်းကြပ်စွာစမ်းသပ်မည်ဖြစ်သည်။ သင့်အား အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကို အမြဲအာမခံပါသည်။
အကောင်းဆုံးပေးသွင်းသူ - ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေဒီယိုအော်ပရေတာများအတွက် ရေဒီယိုအော်ပရေတာများအတွက် ပြီးပြည့်စုံသောရေဒီယိုအစီအစဉ်များ အစုံအလင်၊ အဝေးသင်သင်ကြားမှုနှင့် အွန်လိုင်းအစည်းအဝေးများအတွက် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သည့်ကိရိယာများနှင့် ထုတ်လွှင့်မှုတိုင်းအတွက် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် စီးပွားဖြစ်ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုတိုင်းအတွက် လမ်းညွှန်ချက်ဝယ်ယူခြင်းတို့ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
မည်သည့် ထုတ်လွှင့်မှု အခြေအနေများအတွက်မဆို ပြီးပြည့်စုံသော အသံနှင့် ဗီဒီယို ထုတ်လွှင့်မှု ထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့က ကတိပြုပါသည်။ FMUSER အသံလွှင့်ရုံ.
ယခုအချိန်အထိ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များနှင့် ရေရှည်လက်တွဲရန် အောင်မြင်စွာ ထူထောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ တိုင်းပြည်နှင့်ဒေသကြီး 200 ငါးတိုက်ကြီးပေါ်မှာ။
—— ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန စက်ကိရိယာများနှင့် ပြီးပြည့်စုံသော ဖြေရှင်းနည်းများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ drive-in ဘုရားကျောင်းနှင့် drive-in ပြဇာတ်ရုံ၊ ကော်ပိုရိတ်နှင့်အဖွဲ့များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအေဂျင်စီများ၊ ဆေးရုံများ၊ အားကစားလုပ်ငန်း၊ အမျိုးသားကုမ္ပဏီများနှင့် လူထုရေဒီယိုစခန်းများ. စိတ်ကြိုက်ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုဖြေရှင်းချက်ထောင်ပေါင်းများစွာကျော်ကို တစ်ဦးချင်းနှင့် စီးပွားဖြစ် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများအတွက် အောင်မြင်စွာ ဖန်တီးထားသည်။ >> နောက်ထပ်
—— ကျွန်ုပ်တို့သည် ကဲ့သို့သော ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြေရှင်းချက်များစွာကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ရေဒီယိုစခန်းအစုံအလင်၊ ရေဒီယိုဌာနအင်ဂျင်နီယာအခန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ ရေဒီယိုစတူဒီယိုပက်ကေ့ခ်ျအပြည့်အစုံ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများပါရှိသော အသံလွှင့်အင်တင်နာစနစ်အပြည့်အစုံ၊ စတူဒီယိုအသံလွှင့်စက်ချိတ်ဆက်ကိရိယာများစသည်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ IPTV ကုဒ်ဒါ၊ ဒီကုဒ်ဒါနှင့် အသံပြောင်းကိရိယာ အခြားအတူ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု ကိရိယာ 2021 ခုနှစ်တွင် သင်၏ကူးစက်ရောဂါတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကို စတင်ရန် သို့မဟုတ် ဆက်လုပ်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရာနှင့်ချီသော မတူညီသော o များကိုလည်း ဖန်တီးထားပါသည်။အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်ပေါင်းစပ်မှုများ သင့်အတွက်၊ အားလုံးသည် ဘတ်ဂျက်စျေးနှုန်းနှင့် အရည်အသွေးကောင်းများဖြင့် လာပါသည်။ >> နောက်ထပ်
FMUSER မှ ထုတ်လွှင့်သည့် ထုတ်ကုန်များနှင့် ဖြေရှင်းချက်အားလုံးကို ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်ထားပြီး၊ ဘတ်ဂျက်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရန် ကတိပြုပါသည်။
FM/TV Broadcast Transmitter Series - ဤစီးရီးတွင် ပါဝါအမျိုးအစားများစွာ၊ ချိန်ညှိနိုင်သော ပါဝါ၊ အားကောင်းသော RF အချက်ပြထုတ်လွှင့်နိုင်စွမ်းနှင့် ကျယ်ပြန့်သော အပလီကေးရှင်းအကွာအဝေးတို့ ပါဝင်သည်။ ဤစီးရီးများကို အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိ အသံလွှင့်ဌာနများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး အထူးသဖြင့် ကပ်ရောဂါ၏လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင် လက်ရှိတွင် ၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍသည် အထူးထင်ရှားသည်။
FM/TV အသံလွှင့်အင်တင်နာစီးရီး - ဤစီးရီးသည် စျေးနှုန်းချိုသာသော၊ ခိုင်ခံ့သောစွမ်းဆောင်ရည်၊ မြင့်မားသောအမြတ်၊ အဆင်ပြေပြီး အမြန်တပ်ဆင်မှုနှင့် ဆန်းသစ်သောပုံစံတို့ပါရှိသည်။ ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးတွင် စက်ဝိုင်းပုံဝင်ရိုးစွန်းအင်တာနာ၊ မြေပြင်လေယာဉ်အင်တင်နာ၊ ကားအင်တင်နာ၊ dipole FM အင်တင်နာ၊ yagi အင်တင်နာ၊ ဘရော့ဘန်းအင်တင်နာနှင့် အထိုင်အင်တင်နာတို့ကို အကျုံးဝင်ပါသည်။
တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းစီးရီး - စီးရီးတွင် ဟာ့ဒ်ဝဲ IPTV ကုဒ်နံပါတ်များ၊ IPTV ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများနှင့် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက် IPTV ထရန်ကုဒ်ဒါများ၊ ချန်နယ်တစ်ခု၊ ချန်နယ်4လိုင်းနှင့် ချန်နယ် 16 လိုင်းထည့်သွင်းရွေးချယ်စရာများပါရှိသည်။ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီး latency နည်းသော၊ H.264/H.265 နှင့် များစွာသော ကွန်ရက်ပရိုတိုကောများကို ပံ့ပိုးပေးသည်
ရေဒီယိုအင်ဂျင်နီယာခန်းအတွက် စက်ပစ္စည်း - ဤစီးရီးတွင် လူကြီးအချို့ပါရှိသည်၊ အချို့မှာ ပါဝါမြင့်မားသော RF စစ်ထုတ်ခြင်း၊ FM နှင့် တီဗီပေါင်းစပ်ကိရိယာ၊ ပါဝါမြင့်မားသော RF တုံးကြီးဝန်စသည်တို့ပါ၀င်သော အထက်ဖော်ပြပါစက်ပစ္စည်းများထက် ဈေးပိုကြီးပါသည်။